ကျေးလက်နိုင်ငံတော်: December 2010
Posted by victorOway at 2:59 PM No comments:
နှင်းဆီရောင် တော်လှန်ရေး ရုပ်ပုံလွှာ အပိုင်း(၁၉)။
၂၃၁။ ရဲဘော်မင်းသိန်း- ဒုတပ်စိပ်မှုး-၂၁၀-တပ်ရင်း
၂၃၂။. ရဲဘော်နိုင်ဝင်း-တပ်သား၊ ၂၁၀-တပ်ရင်း။
၂၃၃။ ရဲဘော်မင်းသိန်း(အာလူး)တပ်ကြပ်ကြီး၊၂၁၀-တပ်ရင်း၊ ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ခြေထောက်ဒဏ်ရာ။(လက်နက်ကြီးထိ)။
၂၆၆။ ရဲဘော်သိန်းထွန်းအောင်-က/ပ၃၆၇၄။တပ်စိပ်မှုး။၂၁၂တပ်ရင်း၁၉၉၄ခုနှစ်။၀မ်းအောင်တိုက်ပွဲ။ ယာပုခုံးညှပ်ရိုးကျိုး။
Posted by victorOway at 7:41 AM No comments:
နှင်းဆီရောင် တော်လှန်ရေး ရုပ်ပုံလွှာ အပိုင်း(၁ဂ)။
နှင်းဆီရောင် တော်လှန်ရေး ရုပ်ပုံလွှာ အပိုင်း(၁ဂ)
၂ဝဝ၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့အထိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ။ ကျဆုံး။ သေဆုံး ရဲဘော်များ စာရင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ စာရင်း ၁ ၊ ရဲဘော် သန်းအောင် --- ကပ-၄၄၅၂ --တပ်သား -- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း-- ၁၉၈၉---ခုနှစ်
၂ ၊ ရဲဘော် ကျော်ဝင်းစိန် --- ၄၄၉၅ -- တပ်သား -- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၁၉၈၉---ခုနှစ်
၃ ၊ ရဲဘော် ကျော်လွင် ---- ဆသရ -- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၁၉၉၅ ---ခုနှစ် ---- ကျည်ပေါက်
၄ ၊ ရဲဘော် သန်းအောင် --- တပ်စိတ်မှူး -- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၁၉၉၄---ခုနှစ်
၅ ၊ ရဲဘော် ကျော်ကျော် (၁) --ကပ ၄၄၂၉ --တပ်စိတ်မှူး -- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- နတ်အိမ်တောင်
၆ ၊ ရဲဘော် ဘခက် ---- တပ်သား -- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း -- ၁၉၉ဝ
၇ ၊ ရဲဘော် နေမျိုး ---ကပ ၃၈၉၁ -- ၁ဝ၁ (ခွဲ ၂) --- ၁၉၈၉ --ဗလိုင်နော့တိုက်ပွဲ။ -- လက်နတ်ကြီးစကျောကုန်းထိ
၈ ၊ ရဲဘော် ဇော်ဝင်းလွင် --- ကပ ၃၉ဝဝ -- ၁ဝ၁ (ခွဲ ၂) -- ၁၉၈၉ ဗလိုင်နော့တိုက်ပွဲ။ လက်နတ်ကြီးစ နားရွက်ထိ
၉ ၊ ရဲဘော် ရဲထွတ်အောင် --- ၃၈၉၃ --- ၁ဝ၁ (ခွဲ ၂) --- ၁၉၉၂ ရင်း-၂ဝ။ --- ဝဲလက်ဖျံရိုးဒဏ်ရာရ
၁ဝ ၊ ရဲဘော် ဆန်နီ --- ၁ဝ၁ (ခွဲ ၂) --- ၂၆။၈။၁၉၉ဝ --- အရိုးတောင်တိုက်ပွဲ။ --- ခြေထောက်ဒဏ်ရာရ
၁၁ ၊ ရဲဘော် တင်မိုး --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၁၉၈၉ --- (ဗလိုင်နော့။ဘုရားသုံးဆူ)
၁၂ ၊ ရဲဘော် သက်နောင် --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၁၉၈၉ --- (ဗလိုင်နော့။ဘုရားသုံးဆူ)
၁၃ ၊ ရဲဘော် ရာဏ်ဝင်း --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၁၉၈၉ --- (ဗလိုင်နော့။ဘုရားသုံးဆူ)
၁၄ ၊ ရဲဘော် ဇော်မြင့်ဦး --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း --- ၂၆။၈။၁၉၉ဝ --- (အရုတောင်။ဘုရားသုံးဆူ)
၁၅ ၊ ရဲဘော် မောင်မောင်လတ် --- ၁ဝ၁ --- ၂၆။၈။၁၉၉ဝ --- (အရုတောင်။ဘုရားသုံးဆူ)
၁၆ ၊ ရဲဘော် အောင်မြင့်ဟန် --- ၁ဝ၁ --- ၂၆။၈။၁၉၉ဝ --- (အရုတောင်။ဘုရားသုံးဆူ)
၁၇ ၊ ရဲဘော် တင်မောင် --- ၁ဝ၁ (ခွဲ ၂) --- ၂၆။၈။၁၉၉ဝ --- အရုတောင်တိုက်ပွဲ။ --- ခြေထောက်ဒဏ်ရာရ
၁၈ ၊ ရဲဘော် နေမျိုးထိုက် --- ကပ - ၃၆၉၁ --- ၁ဝ၁ (ခွဲ ၂) --- ၂၆။၈။၁၉၉ဝ --- အရုတောင်တိုက်ပွဲ။ --- ခြေထောက်ဒဏ်ရာရ
၁၉ ၊ ရဲဘော် အနှစ် (ခ) စံမြင့် --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း
၂ဝ ၊ ရဲဘော် ဇော်နိုင် --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း
၂၁ ၊ ရဲဘော် မောင်မောင်လတ် --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း
၂၂ ၊ ရဲဘော် စိုးဌေး --- ၁ဝ၁ တပ်ရင်း
၂၃ ၊ ရဲဘော် မြတ်စိုး --- ၁ဝ၂ --- ၂၆။၉။၁၉၉ဝ --- အရုတောင် (ရေးမြောက်) --- ဝဲပုခုံးဒဏ်ရာရ
၂၄ ၊ ရဲဘော် ဇော်ထူး --- ၁ဝ၂ --- ၂၃။၁။၁၉၉၁ --- ရင်းမြောက် (ရေးတောင်) --- ပေါင်ဒဏ်ရာရ
၂၅ ၊ ရဲဘော် စိုးနိုင် --- ၁ဝ၂ ၂၃။၁။၁၉၉၁ (ရေးတောင်) တင်ပါး ဒဏ်ရာရ
၂၆ ၊ ရဲဘော် အေးမင်း ၁ဝ၂ --- ၂၃။၁။၁၉၉၁ --- (ယင်းရဲ။ ရေးမြို့ နယ်တောင်ပိုင်း) ဒူးခေါင်း
၂၇ ၊ ရဲဘော် ဝေမိုး --- ၁ဝ၂ --- ၂၃။၁။၁၉၉၁ --- (ယင်းရဲ။ ရေးမြို့ နယ်တောင်ပိုင်း) --- ပခုံးဒဏ်ရာရ
၂၈ ၊ ရဲဘော် ဝင်းဌေးဦး --- ၁ဝ၂ --- ၂၅။၄။၁၉၉၂ --- (နော်တ ) --- လက်ဒဏ်ရာရ
၂၉ ၊ ရဲဘော် ခိုင်စိုး --- ၁ဝ၂ --- ၂၅။၅။၁၉၉၂ --- (နော်တ) --- လက်ဒဏ်ရာရ
၃ဝ ၊ ရဲဘော် ဘစောထွန်း -ဗဟိုကော်မတီဝင် --- ၁ဝ၂ --- ၂၆။၅။၁၉၉၂ --- (နော်တ) --- ယာခြေမိုင်းထိ
၃၁ ၊ ရဲဘော် လှအောင် --- ၁ဝ၂ --- (တောင်ပေါက်) --- ယာလက်မောင်းဒဏ်ရာရ
၃၂ ၊ ရဲဘော် ကျော်သက် --- တပ်သား --- ၁ဝ၂ --- ၁၉၉၄ --- မျက်စိဒဏ်ရာရ
၃၃ ၊ ရဲဘော် မျိုးသန်းထွန်း --- တပ်စုမှူး --- ၁ဝ၂ --- ၂၆။၈။၁၉၉၅ --- (ကိုးအင်း-ကော့မပြင်) ခါးရိုးဒဏ်ရာရ
၃၄ ၊ ရဲဘော် ဇော်မျိုး(ချက်ကြီး) --- ရဲဘော် ၁ဝ၂ --- ၂၆။၈။၁၉၉၅ --- (ကိုးအင်း-ကော့မပြင်) --- ခါးရုိးဒဏ်ရာရ
၃၅ ၊ ရဲဘော် စိုးနိုင် --- ၂ဝ၁ --- ခြေတဖက်ပြတ်။ (နင်းမိုင်း)
၃၆ ၊ ရဲဘော် သန်းတင် --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၃၇ ၊ ရဲဘော် ကျော်ဇင် --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၃၈ ၊ ရဲဘော် ဘသန်း --- ၂ဝ၁ --- ခြေတဖက်ပြတ်။ (နင်းမိုင်း)
၃၉ ၊ ရဲဘော် လှဌေး --- ၂ဝ၁ --- ခြေတဖက်ပြတ်။ (နင်းမိုင်း)
၄ဝ ၊ ရဲဘော် လှဦး တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၄၁ ၊ ရဲဘော် ဝင်းငယ် (နိုင်ဝင်း) --- တပ်ကြပ်ကြီး --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၄၂ ၊ ရဲဘော် သာဆန်း --- --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၄၃ ၊ ရဲဘော် သောင်းဟန် ၅ဝ၉ဝ -တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၁ --- ၁၉၉၂ --- (ပုလောမြို့ နယ်တပိုတိုက်ပွဲ) ပေါင် နှင့်လက်တွင်ထိ (ပ)။ (အရှေ့ ကုန်းတိုက်ပွဲ) ပါးစပ်ထိ
၄၄ ၊ ရဲဘော် နိုင်နိုင် --- ဆေးမှူး --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၄၅ ၊ ရဲဘော် အောင်စွမ် --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- ပါးစောင်ပြုတ် (ပ)။ ခြေကျိုး (‘ု)
၄၆ ၊ ရဲဘော် အောင်ကျော်ထူး --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၄၇ ၊ ရဲဘော် ထွန်းသိန်း --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၄၈ ၊ ရဲဘော် တင်စိုး --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- ကိုယ်တခြမ်းသေ
၄၉ ၊ ရဲဘော် မဲဒူး (ခ) အေးဇော် --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၅ဝ ၊ ရဲဘော် စိုးမင်းအောင် --- ခွဲအရာခံဗိုလ် --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၅၁ ၊ ရဲဘော် ဘုန်းကျော် --- တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၅၂ ၊ ရဲဘော် မိုးနိုင် --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၅၃ ၊ ရဲဘော် ဝင်းမောင် --- တပ်သား --- ၂ဝ၁ --- လက်နက်ငယ်ထိ
၅၄ ၊ ရဲဘော် ကျော်သူ --- ၂ဝ၁
၅၅ ၊ ရဲဘော် ဇော်ထူး --- ၂ဝ၁
၅၆ ၊ ရဲဘော် ဇော်ဝမ်း --- ၂ဝ၁
၅၇ ၊ ရဲဘော် အာသာ --- ၂ဝ၁
၅၈ ၊ ရဲဘော် ဇော်ဝင်းအောင် --- ၂ဝ၁
၅၉ ၊ ရဲဘော် မောင်မောင်သန်း --- ၂ဝ၁
၆ဝ ၊ ရဲဘော် သန်းထိုက် ၂ဝ၁ --- ၆၁ ၊ ရဲဘော် အေးချို --- တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၁ --- ၂၆။၈။၁၉၉၅ --- ကျောက်စရစ်ရွာ။ ကော့မပြင်း
၆၂ ၊ ရဲဘော် စိုးအောင် --- ၂ဝ၁ --- ၁၈။၅။၁၉၉၂ --- (နော်တ) --- ခြေထောက်ဒဏ်ရာရ။ (မိုင်းထိ)
၆၃ ၊ ရဲဘော် စိုးလွင်ဦး --- ၂ဝ၁ --- ၁၈။၅။၁၉၉၂ --- (နော်တ)
၆၄ ၊ ရဲဘော် အောင်ထွန်း --- ၂ဝ၂
၆၅ ၊ ရဲဘော် မောင်စိုး --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁။၁၉၉၁ --- ယာရင်ဘတ်ဒဏ်ရာရ
၆၆ ၊ ရဲဘော် တင်ထွေး --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ --- ယာရင်ဘတ်ဒဏ်ရာရ
၆၇ ၊ ရဲဘော် စိုးသိန်း --- ၄၈၉၄ --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ ဝဲခြေထောက်ဒဏ်ရာရ
၆၈ ၊ ရဲဘော် မြတ်မိုး --- ယှဝ၅၁ --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ --- ယာလက်မောင်းဒဏ်ရာရ
၆၉ ၊ ရဲဘော် မင်းမင်းကို --- ယှ၁၈၃ --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ --- ယာလက်မောင်းဒဏ်ရာရ
၇ဝ ၊ ရဲဘော် နိုင်ဝင်း --- ယှ၁၈၄ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ --- ဝဲပုခုံးဒဏ်ရာရ
၇၁ ၊ ရဲဘော် ဝင်းမြင့် --- ယှ၁၉၅ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ --- တင်ပါးဒဏ်ရာရ
၇၂ ၊ ရဲဘော် ထွန်းအောင်(မင်းမင်း) --- ၄၈၆၆ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁ --- ယာပေါင်ဒဏ်ရာရ
၇၃ ၊ ရဲဘော် ဝင်းအောင် --- ၄၈၅၇ တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၂
၇၄ ၊ ရဲဘော် နိုင်ငယ် --- ၄၈၉၆ တပ်ကြပ်ကြီး --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၂ --- ယာပခုံး
၇၅ ၊ ရဲဘော် စောသာအေး (ကိုကျော်) --- ယှဝ၃၁ --- တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၂
၇၆ ၊ ရဲဘော် တင့်ဇော်တင့် --- ၄၈၈ဝ --- တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၃ ၁၉၉၂
၇၇ ၊ ရဲဘော် မောင်ကျော် ယှဝ၆၄ --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၁
၇၈ ၊ ရဲဘော် အောင်သန်းတင် --- ၄၈၁၄ --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၂
၇၉ ၊ ရဲဘော် ထွန်းနိုင် (မိုးထက်) --- ၄၈၂၄ တပ်သား --- ၂ဝ၃
၈ဝ ၊ ရဲဘော် အောင်ထွန်း --- ယှဝ၅၃ --- တပ်ကြပ်ကြီး --- ၂ဝ၃
၈၁ ၊ ရဲဘော် မြင့်လွင် (ဝက်ရူး) --- ယှ၂၃၃ --- တပ်သား --- ၂ဝ၃
၈၂ ၊ ရဲဘော် စောသာအင်း(ကိုချောင်း) တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၃
၈၃ ၊ ရဲမေ ဝင်းဝင်းချို --- ၂ဝ၃ --- ခြေသိမ်
၈၄ ၊ ရဲဘော် ယုရှိန် --- တပ်သား --- ၂ဝ၃ --- ၁၉၉၆ --- ယာဖက်ပေါင်ကျိုး
၈၅ ၊ ရဲဘော် ကျော်ဇောဦး --- ၄ဝ၂၄ --- တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၃ --- ၂။၃။၁၉၉၃ --- (သင်ပုန်းကျွန်း)လယ်သစ်သံပျာရွာ --- ယာလက်မောင်းဒဏ်ရာရ
၈၆ ၊ ရဲဘော် ရန်ကျော်အောင် --- ၂ဝ၃
၈၇ ၊ ရဲဘော် မင်းနိုင် --- ၄၁၈၇ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄ှ၂ဝ၅
၈၈ ၊ ရဲဘော် တင့်ရှိန် --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅
၈၉ ၊ ရဲဘော် ညိုမင်းထွန်း --- တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၄ှ၂ဝ၅
၉ဝ ၊ ရဲဘော် ဇာဇာ (ရဲဇာနည်) --- တပ်သား --- ၂ဝ၄ှ၂ဝ၅ --- ၁၉၈၉ --- ဖလူးခံစစ်စခန်း
၉၁ ၊ ရဲဘော် မောင်ထူး --- တပ်သား --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅
၉၂ ၊ ရဲဘော် လှတင် --- ၃ဝ၅ဝ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅
၉၃ ၊ ရဲဘော် ကျော်စွာ --- ၃၃၅၁ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅
၉၄ ၊ ရဲဘော် ကြည်ဝင်း --- ၃၇၇၇ --- တပ်ရင်းမှူး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ၁၉၉၂ --- စောထတိုက်ပွဲ
၉၅ ၊ ရဲဘော် စောလွင် --- ၃၇၆၈ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅
၉၆ ၊ ရဲဘော် စိုးဝင်း --- ၃၃၆ဝ --- ဆေးမှူး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- (မုကနော်လေးကုန်း) တပ်မဟာ(၆)။ --- ယာမျက်စေ့တလုံးကန်း
၉၇ ၊ ရဲဘော် ဇော်နိုင် --- ၅၂၇ဝ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ခြေတဖက်ပြတ်
၉၈ ၊ ရဲဘော် ညွန့် ဝင်း ၃၃၇ဝ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄-၂ ဝ၅ (နွားလေးခို) တပ်မဟာ (၃)။ --- ညာလက်ပြတ်
၉၉ ၊ ရဲဘော် စိုးရွှေ --- ၃၇၆၃ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄ ---ှ၂ဝ၅ ၁၉၈၉ --- ကေအင်ယူတပ်မဟာ (၅)။ --- တံတောင်ဆစ် ဒဏ်ရာရ။ လက်ကောက်၊
၁ဝဝ ၊ ရဲဘော် သောင်းမြင့် ---၃၃၄ဝ တပ်သား ---၂ဝ၄-၂ဝ၅
၁ဝ၁ ၊ ရဲဘော် မောင်မောင်သန်း --- ၃၃၃၃ --- တပ်သား ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ၁၂။၄။၁၉၉၂ --- (မဲညောခီး) ယာခြေပြတ် (မိုင်း)
၁ဝ၂ ၊ ရဲဘော် စိုးအောင် --- ၃၃၆ဝ --- တပ်ကြပ်ကြီး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅
၁ဝ၃ ၊ ရဲဘော် နိုင်ဦး --- ၂၉၈၈ --- တပ်ကြပ် --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ၂။၄။၁၉၉၂ --- (နော်တခံစစ်) ပေါင်ှမျက်လုံးဒဏ်ရာရ (မိမိမိုင်း မိုင်းထောင်စဉ် ပေါက်ကွဲ)
၁ဝ၄ ၊ ရဲဘော် အောင်ထူး ၃၃၄၅ တပ်သား ၂ဝ၄ှ၂ဝ၅ ၅။၂။၁၉၉၂ (မယ်ညောတိုက်ပွဲ) ခြေဖနောင့်ဒဏ်ရာရ
၁ဝ၅ ၊ ရဲဘော် ကြည်အေး --- ၃၃၁၆ --- ရေှးထောက် --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ၁၉၉၃ --- (ဒီမော့ဆို။ သေ့ဆိုလဲရွာတိုက်ပွဲ) ဝဲရင်းဒဏ်ရာရုဏြဏ နှင့်ုဏြူင်္ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ
၁ဝ၆ ၊ ရဲဘော်ဥာဏ်ဝင်း --- တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ၁၈။၄။၁၉၉၂ --- (နော်တခံစစ်) ဝမ်းဗိုက်ဒဏ်ရာရ (ဗွှ ၄ ထိ)
၁ဝ၇ ၊ ရဲဘော် စိုးမိုးအောင် --- ဆေးမှူး --- ၂ဝ၄-၂ဝ၅ --- ၁၂။၄။၁၉၉၂ --- (နော်တခံစစ်) ဝမ်းဗိုက်ဒဏ်ရာရ (ဗွှ ၄ ထိ)
၁ဝ၈ ၊ ရဲဘော် ဘရန် --- ဆေးမှူး --- ၂ဝ၄ှ-၂ဝ၅ --- ၁၉၉၁ --- (ကျိုက်ဒိုဘုရားတောင်) ပေါင်လက်နက်ငယ်ထိ
၁ဝ၉ ၊ ရဲဘော် သန်းဖေ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄ှ ၂ဝ၅ --- ၂၂။၄။၁၉၉၂ --- (နော်တ) --- ယာချိုစောင်းဒဏ်ရာရ
၁၁ဝ ၊ ရဲဘော် ဘိုဘို --- တပ်သား --- ၂ဝ၄ှ-၂ဝ၅ --- ၁၉၈၉ --- ဖလူး ခံစစ်စခန်း --- (လက်နက်ကြီးထိမှန် ဝမ်းပိုက်ဒဏ်ရာ) ၁၁၁ ၊ ရဲဘော် စံကောက် --- ၃၃၂၇ --- တပ်သား --- ၂ဝ၄ --- ၂ဝ၅ --- ၁၉၈၉ (သေ့ဘောဘိုး) --- လက်ညှိးပြတ် ၁၁၂ ၊ ရဲဘော် ရဲလင်း --- ၃၃၆၄ --- တပ်ရေး --- ၂ဝ၄ -ှ၂ဝ၅ ၄။၁၉၉၃ --- (နော်တ) နားရွက်နောက်ဒဏ်ရာရ
၁၁၃ ၊ ရဲဘော် မင်းနိုင် --- ၂ဝ၆
၁၁၄ ၊ ရဲဘော် အောင်မျိုး - တပ်ကြပ်ကြီး --- ၂ဝ၆ --- ၁၉၉၂ --- (ကျိုက်္လုံ။ ဘုရားတောင်။တပ်မဟာ ၆) --- ခြေတဖက်ပြတ်(မိုင်းထိ)
၁၁၅ ၊ ရဲဘော် နွေအောင် --- တပ်သား --- ၂ဝ၆ --- ၂။၁၉၉၂ --- (ကျိုက်ဒုံ။ မိနအတ်။ တပ်မဟာ ၆) --- ကျောနှင့်ခေါင်းတွင်လက်နတ်ကြီးစထိ
၁၁၆ ၊ ရဲဘော် ဖိုးတာ --- တပ်သား --- ၂ဝ၆ --- ၁၉၉၂ (ကျိုက်ဒုံ။ တပ်မဟာ ၆) ကျောတွင်လက်နတ်ကြီးအစထိ
၁၁၇ ၊ ရဲဘော် ဝင်းလှိုင် ဆေးမှူး --- ၂ဝ၆ --- ၁၉၉၂ --- (ကျိုဒုံ။ တပ်မဟာ ၆) လက်ဒဏ်ရာရ
၁၁၈ ၊ ရဲဘော် ရဲလင်းထွန်း --- ၃၅၆၄ --- တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၇
၁၁၉ ၊ ရဲဘော် တင်မောင်အေး --- ၃၅၂၅ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- လက်ကျိုး
၁၂ဝ ၊ ရဲဘော် တင်ဝင်း --- ၃၄၉၃ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၂၁ ၊ ရဲဘော် ရာဇင်း --- ၃၄၄၉ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၇
၁၂၂ ၊ ရဲဘော် လှတင် --- ၃၅၁၈ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၂၃ ၊ ရဲဘော် မောင်ဝင်း --- ၃၄၅၂ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၂၄ ၊ ရဲဘော် မင်းမင်းဦး --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၂၅ ၊ ရဲဘော် ရန်နိုင်စိုး --- ၃၄၆၁ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၂၆ ၊ ရဲဘော် တင်ထွေး --- ၃၈ဝ၆ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- ခြေကျိုး
၁၂၇ ၊ ရဲဘော် သက်နိုင်ဦး --- ဆေးမှူး
၁၂၈ ၊ ရဲဘော် မြင့်အောင် --- ၃၈၂၁ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၂၉ ၊ ရဲဘော် ခင်အေး (ဖိုးထောင်) --- ၃၈၄၉ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- လက်ကျိုး။ သိမ်
၁၃ဝ ၊ ရဲဘော် လှငြိမ်း --- တပ်သား
၁၃၁ ၊ ရဲဘော် မြင့်ဦး --- ၃၄၆၆ --- ဒု-တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၇ --- ဗိုက်။ ကျော ဒဏ်ရာရ
၁၃၂ ၊ ရဲဘော် မိုက်ကယ်(တင်မောင်ဝင်း)
၁၃၃ ၊ ရဲဘော် ခင်မောင်စီ --- ၃၉၉၄ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၃၄ ၊ ရဲဘော် ထွေးအောင် --- ၄၂၁၁ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- လက်မ။ သေ
၁၃၅ ၊ ရဲဘော် ဆန်းမြင့် --- ၃၉၉၂ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၃၆ ၊ ရဲဘော် မောင်ထူး --- ၃၄၉ဝ --- တပ်ကြပ်ကြီး ၂ဝ၇
၁၃၇ ၊ ရဲဘော် ဇော်လင်းဦး --- ၃၅၅၅ --- ဒု-တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၇ --- ခြေ။ လက် အကြောသေ
၁၃၈ ၊ ရဲဘော် ခင်မောင်သိန်း --- ၃၅၂ဝ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၃၉ ၊ ရဲဘော် တင်ထွန်း --- ၃၄၅၇ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄ဝ ၊ ရဲဘော် တင်ထွေး (၂) --- ၃၄၄၆ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄၁ ၊ ရဲဘော် မောင်တူး (အတူး) --- ၃၄၇ဝ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄၂ ၊ ရဲဘော် လှထွန်း (အရူး) --- ၃၅၄၄ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၇
၁၄၃ ၊ ရဲဘော် တင့်ရှိန်ဦး --- ၃၅ဝ၇ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- ၁၉၉၂ --- ထွီပါးဝီးကျိုးတိုက်ပွဲ။ မေးရိုးဒဏ်ရာရ
၁၄၄ ၊ ရဲဘော် တင်ငွေ (အီဆာ) --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄၅ ၊ ရဲဘော် မျိုးဝင်း (၂) --- ၄၅၅၇ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄၆ ၊ ရဲဘော် အောင်ကိုလတ် --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄၇ ၊ ရဲဘော် ချစ်ဝင်း --- ၃၄၈၆ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၄၈ ၊ ရဲဘော် သိန်းမြင့် --- ၃၉၈၁ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ ၁၄၉ ၊ ရဲဘော် မင်းလှိုင် --- ၃၈၆၈ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၇
၁၅ဝ ၊ ရဲဘော် မောင်အေး (၁) --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၅၁ ၊ ရဲဘော် သိန်းစိုး --- ၃၉၉၈ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၅၂ ၊ ရဲဘော် ခင်မောင်ကျော် --- ဒု-တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၇
၁၅၃ ၊ ရဲဘော် လှမိုး --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၅၄ ၊ ရဲဘော် သိန်းဟန် (ဘုန်းကြီး) --- ၃၈၅ဝ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၇ --- ခြေပြတ်
၁၅၅ ၊ ရဲဘော် မြင့်လှိုင် --- ၃၄ဝ၁ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၅၆ ၊ ရဲဘော် သန်းစိုး --- ၃၄၉၆ --- တပ်စိတ်မှူး --- ၂ဝ၇ --- ဗိုက်ကွဲ။ အူပြတ်
၁၅၇ ၊ ရဲဘော် တင်ဦး --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၅၈ ၊ ရဲဘော် ဝင်းမြင့် (၂) --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၅၉ ၊ ရဲဘော် မောင်စိုး --- ၄၈၆၁ --- တပ်စုမှူး --- ၂ဝ၇
၁၆ဝ ၊ ရဲဘော် သန်းထွေး (ဗညားဝီစီ) --- ၃၄၄၆ --- တပ်သား --- ၂ဝ၇
၁၆၁ ၊ ရဲဘော် မောင်အေး --- ၃၅ဝဝ --- တပ်ခွဲမှူး --- ၂ဝ၇
၁၆၂ ၊ ရဲဘော် ဗေဒါ (ဘုန်းကြီး) --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- ၉။၂။၁၉၉၅ --- (သံလွင်) လှေပစ်ခံရ။ ဆီးစပ်တွင်ဒဏ်ရာရ
၁၆၃ ၊ ရဲဘော် လှထွန်း (အဘိုင်) --- တပ်သား --- ၂ဝ၇ --- ၉။၂။၁၉၉၅ --- (သံလွင်) လှေပစ်ခံရ
၁၆၄ ၊ ရဲဘော် အောင်သန်းဦး --- ၂ဝ၇
၁၆၅ ၊ ရဲဘော် တင်လှ --- ၄ဝ၂၈ --- ဆေးမှူး ၂ဝ၈ --- ၁၄။၃။၁၉၈၉ --- ကွီးလေး။ တပ်မဟာ -၇
၁၉၈ ၊ ရဲဘော် ခင်မောင်ဝင်း --- တပ်သား --- ၂ဝ၈ --- ၃ဝ။၁၁။၁၉၉၁ --- (ကြိုးဝိုင်း။တပ်မဟာ ၁) --- ယာပေါင်၌ ခြေသလုံးဒဏ်ရာရ
၁၉၉ ၊ ရဲဘော် သံချောင်း -- တပ်သား-- တပ်ရင်း-၂ဝ၈-- နေ့ စွဲ ၃ဝ။၁၁။၁၉၉၁ (ကြိုးဝိုင်း။တပ်မဟာ ၁) ဝဲခြေသလုံးဒဏ်ရာရ
၂ဝဝ ၊ ရဲဘော် ကိုကိုလေး -- တပ်ကြပ်-- ၂ဝ၈ တပ်ရင်း --နေ့ စွဲ ၈။၁၂။၁၉၉၁ (ကျုံကော်-ကွီးလေးကြား) ယာလက်ပြင်ဒဏ်ရာရ
၂ဝ၁ ၊ ရဲဘော် ကျော်ဦး -- တပ်သား --၂ဝ၈ တပ်ရင်း --နေ့ စွဲ --၁၃။၂။၁၉၉၂ (မဲညောခီး။ ရင်း ၂ဝ) ဒူးခေါင်းဒဏ်ရာရ
၂ဝ၂ ၊ ရဲဘော် ရဲအောင် -- ၂ဝ၈ တပ်ရင်း ။။ နေ့ စွဲ -၁၃။၂။၁၉၉၂ (မဲညောခီး။ ရင်း ၂ဝ) လက်ဖျံဒဏ်ရာရ
၂ဝ၃ ၊ ရဲဘော် မျိုးသန့် -- တွဲ တွင်း မှူး-၂ --၂ဝ၈ တပ်ရင်း -- နေ့ စွဲ -- ၂၆။၁။၁၉၉၂ (မဲညောခီး။ ရင်း ၂ဝ) ဂုတ်ပိုးဒဏ်ရာရ
၂ဝ၄ ၊ ရဲဘော် ချစ်စမ်းမောင် --- တပ်စုမှူး-- ၂ဝ၈ တပ်ရင်း -- နေ့ စွဲ ၁၆။၃။၁၉၉၂ (မဲညောခီး။ ရင်း ၂ဝ) ပေါင်ဒဏ်ရာရ
၂ဝ၅ ၊ ရဲဘော် ကျော်နိုင် --- တပ်ခွဲမှူး --၂ဝ၈ တပ်ရင်း-- နေ့ စွဲ -၇။၄။၁၉၉၂ (မဲညောခီး။ ရင်း ၂ဝ) ဝဲခြေထောက် (မိုင်း)
၂ဝ၆ ၊ ရဲဘော် ဝင်းခိုင် --- တပ်သား --၂ဝ၈ တပ်ရင်း
၂ဝ၇ ၊ ရဲဘော် တင်ဦး --ကပ- ၄၅၅၂ --တပ်သား --၂ဝ၉ တပ်ရင်း--၁၉၉ဝ ခုနှစ် (ထွီးပါးဝီးကြိုးတိုက်ပွဲ) နဖူးဒဏ်ရာရ
၂ဝ၈ ၊ ရဲဘော် ခင်ကျော် -- ကပ- ၄၅ဝ၃ --တပ်ခွဲမှူး-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း--နေ့ စွဲ -၁ဝ။၁။၁၉၉၂-- မျက်စေ့တလုံးကန်း (၁၂း၁ဝ နာရီ)
၂ဝ၉ ၊ ရဲဘော် အောင်မြ --- ဒု-တပ်စိတ်မှူး --၂ဝ၉ တပ်၇င်း
၂၁ဝ ၊ ရဲဘော် ခင်ဦး --ကပ- ၄၆ဝ၁ ---ဒု-တပ်စိတ်မှူး --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၁၁ ၊ ရဲဘော် ဟံသာ --ကပ- ၄၅၇၂ --တပ်သား --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၁၂ ၊ ရဲဘော် မိုးချစ်ဦး (မနှဲ)--ကပ- ၄၅၉ဝ --တပ်စိတ်မှူး --၂ဝ၉ တပ်ရင်း--ဘယ်ခြေမသန်
၂၁၃ ၊ ရဲဘော် သွင်ထူး (ကုလားလေး)--ကပ- ၄၅၆၃ --ဆသရ --၂ဝ၉ တပ်ရင်း--လက်ချောင်းများ အကြောသေ ၂၁၄ ၊ ရဲဘော် အောင်ကျော် --ကပ- ၄၅ဝ၇ --တပ်ခွဲမှူး-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း--၁၉၉၂ ခုနှစ်-- (ထွီးပါးဝီးကျိုးတိုက်ပွဲ) ချက်စပ်နှင့်ဝဲလက်ဒဏ်ရာရ
၂၁၅ ၊ ရဲဘော် စန်းအောင် --ကပ-၄၈၂၅ --တပ်ကြပ်ကြီး --၂ဝ၉ တပ်ရင်း ၂၁၆ ၊ ရဲဘော် အောင်ဘော် --ကပ- ၄၆၁၆ --တပ်စိတ်မှူး-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း-- ၁၉၉၂ ခုနှစ် (ထွီးပါးဝီးကျိုးတိုက်ပွဲ) ယာရင်ဘတ်ဒဏ်ရာရ
၂၁၇ ၊ ရဲဘော် စိုးဝင်း -- တပ်စိတ်မှူး --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၁၈ ၊ ရဲဘော် မင်းသိန်း -- ကပ- ၄၆၃၄-- တပ်သား-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း--၁၉၉၂ ခုနှစ် --(ထွီးပါးဝီးကျိုးတိုက်ပွဲ) ခြေသလုံးဒဏ်ရာရ
၂၁၉ ၊ ရဲဘော် ထွန်းအေး --- တပ်သား --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂ဝ ၊ ရဲဘော် စိုးနိုင် -- တပ်သား --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၁ ၊ ရဲဘော် နိုင်နိုင် (ဂေါက်) -- ဒု-တပ်စိတ်မှူး --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၂ ၊ ရဲဘော် ကျော်မင်းဦး -- တပ်သား --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၃ ၊ ရဲဘော် သိမ်းဆန်း -- တပ်ရင်းမှူး-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၄ ၊ ရဲဘော် ခွန်ကျော်ကျော် --- တပ်စုမှူး --၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၅ ၊ ရဲဘော် ထွေးလေး -- တပ်သား-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၆ ၊ ရဲဘော် ရွှေဘ --တပ်သား ၂ဝ၉ တပ်ရင်း --နေ့ စွဲ - ၉။၂။၁၉၉၅ (သံလွင်မြစ်အတွင်းလှေပစ်ခံရ)
၂၂၇ ၊ ရဲဘော် မောင်ရွှေ -- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၈ ၊ ရဲဘော် ရာဏ်ထွန်း(ဘုန်းကြီး) -- ကပ ၄၅၈ဝ-- ၂ဝ၉ တပ်ရင်း
၂၂၉ ၊ ရဲဘော် လှခင် --ကပ ၄၆၁ဝ တပ်သား --၂ဝ၉ တပ်ရင်း--၁၉၉၁ခုနှစ် (ထွီးဖားဝီးကျိုးကားလ
၂၃ဝ ၊ ရဲဘော် ပေါ်ဦး --တပ်စိတ်မှူး --၂၁ဝ --လက်နက်ကြီးထိ
Posted by victorOway at 5:08 AM No comments:
ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသော အားလုံးသောပြည်သူများ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ West Bengal မြို့တော် Kolkata ရှိ Presidency Correctional Home ခေါ် ဗဟိုအကျဉ်းထောင် ကြီးထဲတွင် ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသော ဗမာပြည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ် ဖန် တီးနိုင်ရေး၊ အမျိုးသားများ တန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် ပြည်သူလူထု အာဏာကို မတရားရယူထားသော ဘုံရန်သူ �နအဖ� စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြ သော ရခိုင်ပြည် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ NUPA နှင့် ကရင် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ KNU မှ ရဲဘော် ၃၄ ဦးတို့ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တတ်အားသရွေ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေး ကြပါရန် လူကြီးမင်းများထံ စာရေးအကြောင်းကြား အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။
34 Arakanese freedom fighter in Kolkata jail
ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်နှင့်ကရင်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များသည် အိန္ဒိယစစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ Lt.Cal Grewal ၏ ကမကထပြု ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ သဘောတူဖိတ်ခေါ်ချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အန္ဒမန်၊ နီကိုဘာခေါ် ကပ္ပလီကျွန်းတွင် ကြားခံစစ်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ရာ အိန္ဒိယ ကြေး၊ ရေ၊ လေတပ်များက � Operation Leach� ခေါ် ပင်လယ်မျော့ စစ်ဆင်ရေးဖြင့် ၁၉၉၈ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီကျော်ကျော်လောက်ခန့်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကပ္ပလီကျွန်းစုရှိ �Landfall� ကျွန်းတွင် ဥပါယ် တံမျှဉ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော NUPA မှ စစ်ဦးစီးချုပ် ခိုင်ရာဇာ၊ ဗိုလ် မှူးစောထွန်း၊ ဗိုလ်ရန်နိုင်၊ ဗိုလင်းဇံခိုင်နှင့် KNU မှ ဖဒိုမှူးလယ်၊ ဗိုလ်မြင့်ဆွေတို့ ၆ ဦးကို သွေးအေးအေးဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် အနီးကပ်ပစ်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖမ်းဆီးပြီး အရပ်သားအာဏာပိုင်များ လက် ထဲသို့ လွဲအပ်ခြင်းမပြုဘဲ အန္ဒမန်ကျွန်းမြို့တော် �Port Blair� ၏ စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုတွင် တိတ်တဆိတ် ခေတ္တ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ထဲမှ ၁၀ ဦးကို New Delhi သို့ စစ်တပ်လေယာဉ်ဖြင့် ယူဆောင်ကာ M.I စစ်ထောက်လှမ်းရေးရုံးချုပ်တွင် ရက်အတန်ကြာ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျန်ရဲဘော်များကို သတင်းမီဒီယာသမားများ လက်လှမ်းမမှီနိုင်သော Port Blair မြို့ တောင်ဖက် မိုင်ရာပေါင်းများစွာကွာဝေးသော နီကိုဘာကျွန်းရှိ �Camp bell Bay� မြို့ငယ်သို့ လျှို့ဝှက်ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုတွင် လျှို့ဝှက် စွာ ချုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်။ Delhi သို့ယူဆောင်သွားချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ ၁၀ ဦးကို ယူနီဖေါင်းများ ပြန်ဝတ် ပေးပြီး သာမန်အရပ်သားများ ခွဲခြားမသိနိုင်အောင် ပုံဖျက်ကာ တိတ်တဆိတ် ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို့ နောက် အရပ်သားအာဏာပိုင်များလက်ထဲသို့ ၂၇၊ ၀၂၊ ၉၈ နေ့တွင် လွဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး Port Blair မြို့အကျဉ်း ထောင်သို့ ၂၄၊ ၀၃၊ ၉၈ နေ့တွင် ပြန်လည် ယူဆောင်ချုပ်နှောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၆၊ ၀၃၊ ၉၈ နေ့ Port Blair Chief Juicial Majistrate (C-J-M) Court သို့ ရုံးထုတ်ခြင်းခံရပြီး ၁၈၊ ၀၂၊ ၉၈ နေ့စွဲဖြင့် Lt. Comman-der R.S Dhauker ၏ First Information Report ခေါ် F.I.R No 50/98 တွင် U/S121A/ 122/123/120B IPC Section 14 of Foreigners Act, 1946- Section 25/27 Arm Act, 1959 and Section5of Explosive substance Act, 1908 စသည့်ပုဒ်မများဖြင့် တရားစွဲကာ နိုင်ငံတကာ လက်နက် မှောင်ခိုအရောင်းအ၀ယ် သ မားများဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသရှိ အိန္ဒိယအစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ပုန်ကန်နေကြ သော သူပုန်များကို လက်နက်များရောင်းချ အကူအညီပေးကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးရန် ကြိုး ပမ်းနေကြသူများဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အမှုကို Central Bureau of Intelligence (C.B.I) လက်ထဲသို့ လွဲအပ်ပြီး ၃ လအတွင်း အမှုတွဲမတင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ၂၈၊ ၀၅၊ ၉၈ နေ့ C.J.M မှ အာမခံ ပေးသော အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး I.P. Gupta လက်မှတ်ဖြင့် National Security Act ဟုဆိုကာ နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် ၁၂ လတိုးရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အမှန်မှာ ကျွန်တော်တို့ သည် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ စွပ်စွဲသလို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့်လုပ်ရပ်များကို မည် သည့်အခါမှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိခဲ့သည်သာမက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဆင် ရေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဗမာပြည်တွင် တရုတ်အစိုးရ၏ စစ်အခြေစိုက်စခန်းများ၊ ရေဒါစခန်းများတည်ဆောက်နေ ခြင်းကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းပေးခြင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့် သတင်း များ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Port Blair မြို့ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးပုဒ်မဖြင့် အကျဉ်းချခံနေရစဉ် ထမင်း ယူချိန်၊ ရေချိုးချိန်မှလွဲ၍ စခန်းအပြင်သို့ ထွက်ခွင့်မပြုဘဲ တိုက်ပိတ်ထားကာ ပြင်ပနှင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ် တောက်ထားခဲ့သည်။ New Delhi အခြေစိုက် South Asian Human Rights Documentation Centre မှ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ �Hinery Tiphy� သည် တရားရုံးမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှင့် တွေ့ဆုံရန် ၂၇၊ ၀၈၊ ၉၈ နေ့ အကျဉ်းထောင်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင်များ၏နှောက်ယှက်မှုကြောင့် ကျွန် တော်တို့ထဲမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် အချိန်အနည်းငယ် တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်မှအပ ကျန်လူများနှင့် တွေ့ခွင့်မရ သည့်အပြင် နောက်ထပ် အန္ဒမန်၊ နီကိုဘာကျွန်းသို့ လာရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရသဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိခဲ့တော့ပေ။ National Security Act ပုဒ်မဖြင့် ၁၂ လပြည့်သည့် တိုင် အာဏာပိုင်များထံမှ တစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားပြောင်းလဲမှုမရှိသဖြင့် မတတ်သာသည့်အဆုံး ၇ ရက်ကြာ အစာ ငတ်ခံဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသောအခါမှသာ တရားရုံးမှ အစိုးရရှေ့နေတစ်ဦးနှင့် ရေဒီယိုနားထောင်ခွင့်၊ သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်းများ ဖတ်ခွင့်ပြုပါတော့သည်။ အစိုးရမှပေးသောရှေ့နေကို အယုံအကြည်မရှိသဖြင့် ၂၈၊ ၀၈၊ ၉၉ နေ့ New Delhi အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ Ms. Nandita Hakasar ကို ကျွန်တော်တို့၏ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ရှေ့နေမကြီး Ms. Nandita Haksar နှင့် Port Blair C.J.M Mr. Natoo တို့၏ ပူပေါင်းကူညီ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် လူတစ်ဦး အာမခံငွေ ရူပီ ၁၀၀၀၀ ကျပေးကာ Personal Surety Bond ဖြင့် ၁၃၊ ၁၀၊ ၉၉ နေ့ ည ၁၂ နာရီခန့်တွင် အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ထောင်ဗူးဝတွင် ရဲမှ ပြန်ဖမ်းပြီး Port Blair မြို့တွင်း အစိုးရအဆောက်အဦး သုံး ထပ်တိုက်အိုတစ်လုံးပေါ်တွင် နေရာချပေးကာ ထူထပ်သော အစောင့်အရှောက်များနှင့် တင်းကြပ်သော ဥပဒေ များချမှတ်ကာ � House Arrest� ဖြင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ အပြင်ထွက်လျှင် ပုလိပ်အ စောင့်အ ရှောက်ဖြင့် သွားလာရပါသည်။ တရားရုံး၊ ဆေးရုံ၊ ဈေးမှအပ အခြားနေရာများသို့ လည်ပတ်ခွင့်မပြုပါ။ မနက် တစ်ခါ၊ ညတစ်ခါ လူစစ်ဆေးသည်။ ၁၅၊ ၁၁၊ ၉၉ နေ့ New Delhi မှ ရှေ့နေ Ms. Vrinda Grouer နှင့် ဒေသခံ ရှေ့နေ Ms. T.Vasantha တို့ကို နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့၏ရှေ့နေများအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေများ တရားရုံးတွင် လျောက်လဲချက်အရ C.J.M က ကျွန်တော်တို့ ထဲမှ လူ ၅ ဦးကို ပထမသုတ်အနေဖြင့် New Delhi ရှိ UNHCR ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခံရန် ခွင့် ပြုခဲ့သည်ကို C.B.I က အထက်တရားရုံးတွင် လျောက်လဲခဲ့သဖြင့် အထက်တရားရုံးမှ UNHCR ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် တွေ့ဆုံရန် New Delhi သို့ သွားရောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ၀၂၊ ၀၇၊၂၀၀၁ တွင် Association for Protection of Democrative Rights (A.P.D.R) ခေါ် လူ့အခွင့်အရေး ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုယ် စားလှယ်နှစ်ဦးတို့ ကျွန်တော်တို့နှင့်တွေ့ပြီး အကူအညီပေးရန် လာရောက်ခဲ့သည်ကို အာဏာပိုင်များက ငြင်း ပယ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ မည်သည့်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းကိုမှ ကျွန်တော်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မပြုသလို သ တင်းမီဒီယာသမားများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်၊ အဆက်အသွယ်ပြုခွင့်၊ တယ်လီဖုန်းပြောခြင်းများကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အပေါ် စာနာမှုရှိသော ဒေသခံများအား ကျွန်တော်တို့ကို အကူအညီမပေးရန် ခြိမ်းခြောက်အကျပ် ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်များ သင့်တော်ရာပညာတစ်ခုခု သင်ယူခွင့်၊ ဥပမာ- အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ခွင့် စသည်တို့ကို တရားဝင်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ၁၀၊ ၀၇၊ ၂၀၀၁ နေ့တွင် NUPA နှင့် KNU မှ ရဲဘော်နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် သတင်းအစအန မရရှိသေးပေ။ ၀၁၊ ၁၂၊ ၂၀၀၃ နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့၏ အကျိုးဆောင် ဒေသခံရှေ့နေမငယ် Ms. T. Vasantha သည် သူမ၏နေအိမ် တွင် နေ့လည်ချိန် လည်ပင်းကို ဓါးနဲ့ထိုး၍ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသည်။
ဤအတောအတွင်း နှစ်လတစ်ကြိမ် တစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ရုံးတက်နေရပါသည်။ တရားရုံးသို့ရောက်တိုင်း ကျွန် တော်တို့သည် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ စွပ်စွဲသလို လက်နက်မှောင်ခိုအရောင်းအ၀ယ်သမားများမဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဗမာ နအဖ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြ သော NUPA နှင့် KNU မှ ရဲဘော်များဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးတရားဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်ပေးပါရန် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုသော်လည်း တရားလို C.B.I မှ ကျွန်တော်တို့အမှုကို စုံစမ်း၍ မပြီးသေးကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနမှ ပူးပေါင်းကူညီမှုမရှိ၍ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆီသို့ အမှုနှင့်ပတ်သက်သော သက် သေအထောက်အထားများနှင့် Operation Leach တွင် ပါဝင်ခဲ့သော စစ်တပ်မှ အရာရှိများကို စုံးစမ်းမေးမြန်း ခွင့်ပြုရန် အကြိမ်ကြိမ်အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပြန်ကြားခြင်းမရှိကြောင်း စသည် ဖြင့် C.B.I မှ နောက်ထပ် အချိန်တိုးပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်လျောက်လဲနေသဖြင့် မတတ်သာသည့်အဆုံး ကျွန် တော်တို့ရှေ့နေမကြီး Ms. Nandita Haksar သည် ၁၇၊ ၀၉၊ ၂၀၀၄ တွင် New Delhi ရှ်ိ Supreme Court တွင် တိုက်ရိုက်လျောက်လဲချက် တင်ပါတော့သည်။ ၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၀၄ တွင် Supreme Court မှ C.B.I အရာရှိနှင့် အန္ဒမန်၊ နီကိုဘာကျွန်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တရားမစွဲနိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့ကို တရားသေ ပြန်လွှတ်ပေးရတော့မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် နောက်ဆုံး မတတ်သာသည့်အဆုံး C.B.I သည် ၂၇၊ ၁၂၊ ၂၀၀၄ နေ့တွင် Port Blair ရှိ C.J.M Court တွင် တရားစွဲဆိုပါတော့သည်။ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ အမှန်တ ရားဖက်မှ အမှန်တကယ်ရပ်တည်ခဲ့လျှင် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကစ၍ ကျွန်တော်တို့အမှုကို ရုံးတင် တရားစွဲ ဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ တရားရုံးတွင် တချိန်လုံး ဆင်ခြေပေးနေခဲ့သလို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမရှိခဲ့၍ ကြန့်ကြာနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အိန္ဒိယ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ကျွန်တော်တို့ကို ပူးပေါင်းကူညီမှုမရှိခဲ့၍သာ ဤကဲ့သို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ အချိန်ဆွဲ ကြန့်ကြာနေ ခြင်းဖြစ်သည်ကို Supreme Court မှ အမိန့်ချမှတ်၍ တရားမစွဲဆိုနိုင်လျှင် တရားသေ ပြန်လွှတ်ပေးရတော့မည့် အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်မှသာ အနီးကပ်၍ ၅နှစ် ၆ နှစ်နှင့် စုံးစမ်း၍မပြီးနိုင်သောအမှုကို တစ်လတည်းနှင့် စုံ စမ်းစစ်ဆေး တရားစွဲဆိုနိုင်သည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ New Delhi ရှိ Supreme Court တွင် လျောက်လဲချက် မတင်ခဲ့၊ Supreme Court မှ ယခုလို အမိန့်မချမှတ်ခဲ့ လျှင် C.B.I သည် ယခုအချိန်ထိ တရားစွဲဆိုနိုင်အုံးမည်မဟုတ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရသည့်အချိန်ထိ (၀ါ) ကျွန်တော်တို့ကို အိုမင်းမစွမ်းသည့်အရွယ်ရောက်သည်အထိ အချိန်ဆွဲထားအုံးမည်ဖြစ်ပါ သည်။
C.B.I တရားစွဲဆိုချက်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် ဗမာစစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန် ပုန်ကန်နေကြသော NUPA နှင့် KNU မှ သူပုန်များဖြစ်ကြောင်း၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် အမြောက်အ များနှင့် အိန္ဒိယရေကြောင်းပိုင်နက်ထဲသို့ တရားမ၀င် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်ဟုဆိုကာ U/S 14 of Foreigners Act, 1947, 25 (1.B) of Arms Act, 1959, Section5of Explosive substances Act, 1908 စသည့် ပုဒ်မများဖြင့် တရားစွဲဆိုထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် တရားမျှတစွာဖြင့် လူ သတ်တရားခံများကို ဖေါ်ထုတ်ရမည့်အစား အကြမ်းဖက် လူသတ်သမားများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ကျွန်တော်တို့ကို တသက်လုံး ထောင်ထဲတွင်ပိတ်လှောင်ထားရန် ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက် မအောင်မြင်လျှင် တောင် ရနိုင်သလောက် အချိန်ဆွဲထိန်းသိမ်းထားရေးအစီအစဉ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုပြီး အမှုကို ကြားနာစစ်ဆေးနေ စဉ် ဆက်လက်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ နှစ်ရှည်လများ ကြန့်ကြာအောင် ပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် Kolkata ဗဟိုတရားရုံးသို့ အမှုကိုပြောင်းရွေ့ရန် အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ Ms. Kamini Jaiswal မှ တဆင့် Delhi ရှိ Supreme Court သို့ ၃၀၊ ၀၃၊ ၂၀၀၅ နေ့တွင် လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ ၎င်း လျှောက်လဲချက်ကို Supreme Court မှ လက်ခံကြားနာပြီး Supreme Court ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် ၁၀၊ ၁၀၊ ၂၀၀၆ နေ့ Port Balia ရှိ Session Court မှ ကျွန်တော်တို့အမှုကို Kolkata တရားရုံးသို့ ပြောင်းရွေ့ခွင့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနေ့တွင်ပင် ကျွန်တော်တို့လည်း Port Balia အကျဉ်းထောင်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းခံရပါတော့သည်။ ၃၁၊ ၁၀၊ ၂၀၀၆ နေ့တွင် Kolkata ရှိ Presidency Correctional Home ခေါ် ဗဟိုအကျဉ်းထောင်သို့ ရောက်ရှိ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ အမှုကိုကြားနာရန် စတင်သည်နှင့် C.B.I က ကျွန်တော်တို့သည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်အန္တရယ်ပြုနိုင်သောကြောင့် တရားရုံးတော်ရှိ ပြည်သူများရှေ့မှောက်တွင် ကြားနာစစ်ဆေးရန် မသင့်တော်ကြောင်း၊ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် လျှို့ဝှက်စွာ စစ် ဆေးသင့်ကြောင်း၊ West Bengal �chief Minister ထံသို့ စာရေးအကြောင်းကြားခဲ့သဖြင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် မှ ကျွန်တော်တို့အမှုကို အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ကြားနာစစ်ဆေးရန် တရားရုံးသို့ ညွန်ကြားလွှာပေးပို့ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ Ms.Nandita Haksar ၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် Kolkata ရှိ် လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်များ အထူးသဖြင့် Kolkata တွင် လူအ များ ရိုသေလေးစားမှုကို ခံရသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အိန္ဒိယ တပ်မတော်ဖခင်ကြီး Subhas Chandra Bose ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် �Rani Jhonsi� အမျိုးသမီးတပ်ရင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူများထဲမှ တစ် ယောက်ဖြစ်သော Dr. (Col) Lakshuni Sehgal ဦးစီးပြီး ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက် Solidarity Communittee for Burma�s Freedom Fighters စသည့် ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းကာ ကျွန်တော်တို့အမှုကို တရားရုံးတော်ရှိ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် ကြားနာစစ်ဆေးရန် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ကန့်ကွက်လွှာကို ပေးပို့ခဲ့သဖြင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က သူ၏အမိန့်စာလွှာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် C.B.I သည် West Bengal အာဏာပိုင်များ၊ ပြည်သူများ နားလည်မှုလွဲ၍ ကျွန်တော်တို့အပေါ် စာနာမှုမရှိစေရန် သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် သတင်းအမျိုးမျိုးလွင့်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ထောင်အာဏာပိုင်များ၏ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆက်ဆံခြင်းကို ခံကြရသည်။ ထောင်အာဏာပိုင်များ၏ စေခိုင်းချက် ကြောင့် ထောင်ဝါဒါနှင့် အကျဉ်းသား ၃၀၀-၄၀၀ ခန့် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သည့် အဆောင်ထဲသို့ ၀ိုင်းဝန်း ၀င်ရောက်ရိုက်ပုတ်ကြသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော် တော်တော်များများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြသည်။
၎င်းပြင် C.B.I သည် ၎င်းတို့၏ တရားလိုသက်သေ ၁၈ ဦးနှင့်အတူ နောက်ထပ်ရသလောက် အချိန်ဆွဲနေခဲ့ သည်။ အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြကာ သက်သေများ တရားရုံးတော်သို့ လာရောက်သက်သေထွက်ဆိုရန် ကြန့် ကြာအောင် ပြုလုပ်နေခဲ့သည်။ အဓိက မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြသော Operation Leach တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှ အရာရှိသုံးဦးတို့သည် တရားရုံးတော်သို့ လာရောက်ရန် အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြ ငြင်းဆန်နေခဲ့ ကြသည်။ ဤအတောအတွင်း ကျွန်တော်တို့အမှုကို အဓိက တာဝန်ယူကိုင်တွယ်စစ်ဆေးနေသော Session Judge- Ashima Kumar Roy သည် ရုတ်တရက် ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ နောက်အသစ်ခန့်မည့် တရားသူကြီးကို ၁၀ လခန့် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ တရားသူကြီး ရုတ်တရက် ပြောင်းရွေ့သွားခြင်းသည်လည်း ကျွန်တော်တို့အမှု ကို ကြန့်ကြာစေရန် သွယ်ဝိုက်၍ အချိန်ဆွဲခြင်းတမျိုးသာဖြစ်သည်။ Kolkata ရှိ Bichar Bhawan, Session Court တွင် အမှုကို စတင်ကြားနာသော ၂၉၊ ၀၁၊ ၂၀၀၇ နေ့မှစ၍ ၁၂၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀ ထိ Plea bargaining ဖြင့် အမှုပြီးပြတ်သည်အထိ သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း တရားသူကြီး ၄ ဦး ပြောင်းလဲချထားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး နှစ်ဘက်သက်သေများကို စစ်ဆေးပြီးစီး၍ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ အပြန်အလှန်ချေပငြင်းခုန်မည့် Argument ကို ၆ လစောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ၎င်းပြီးလျှင် တရားသူကြီးက အမှုကိုဆုံးဖြတ်အမိန့်ချမှတ်ရန်သာ ကျန်တော့သည်။ သို့ သော် Argument ကို ၆ လအထိ စောင့်သော်လည်း နောက်ထပ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ အချိန်ဆွဲ ကြန့် ကြာနေမှုကို မစောင့်နိုင်တော့သည့်အပြင် အမိန့်ချမှတ်ဆုံးဖြတ်လျှင် ကျွန်တော်တို့တွင် ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ် ကာ အမှုနိုင်ခြေရှိသော်လည်း C.B.I သည် Hight Court, Supreme Court စသည့် အထက်တရားရုံး များသို့ အယူခံဝင်ကာ အတိုင်းအတာမဲ့ အချိန်ဆွဲထားမည်ကို မစောင့်နိုင်တော့သဖြင့် Plea bargaining ဖြင့် အမှုကို ပြီးဆုံးစေရန် ၀၅၊ ၀၅၊ ၂၀၁၀ နေ့တွင် တရားသူကြီးထံ ကျွန်တော်တို့ ၃၄ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးကာ လျှောက် ထားခဲ့သည်။ C.B.I နှင့် ကျွန်တော်တို့အကြား အပြန်အလှန် သေသေချာချာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးပြီးမှ Plea bargaining ဖြင့် အမှုကို အပြီးသတ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တရားသူကြီး အမိန့်ချမှတ် သောအခါ ကျွန်တော်တို့ထံမှ သိမ်းယူထားခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ပိုင် ပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် ငါးဖမ်းလှေနှစ်စီး နှင့် အမြန်ယာဉ်နှစ်စီးကို မပေးသည့်အပြင် နောက်ထပ် လူတစ်ဦး ဒဏ်ငွေ ရူပီငွေ ၆၀၀၀ ကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် ၎င်းငွေကိ်ု မပေးဆောင်နိုင်လျှင် နောက်ထပ် ၈ လထောင်ကျခံရမည်ဟု အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမှာ တရားမျှတမှု မရှိ ပေ။ Under Section 265 B ၏ Plea bargaining ဥပဒေပုဒ်မအရ ကျသင့်ပြစ်ဒဏ်၏ထက်ဝက် (၀ါ) သုံးပုံတစ် ပုံကို ကျခံရမည်ဖြစ်သောကြောင်း Section သုံးခုဖြစ်သော 1. U/S 14 Foreigners Act အတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်နှင့်သုံးလ၊ ဒဏ်ငွေ ၂၀၀၀၊ ၎င်းကိုမပေးနိုင်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၃လ။ 2. U/S5(B) of the Explosive substance Act ခေါ် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လက်နက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်နှင့် သုံး လ၊ ဒဏ်ငွေ ၂၀၀၀၊ ၎င်းကိုမပေးနိုင်လျှင် နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ်သုံးလ၊ 3. U/S 25-1B of the Arms Act ခေါ် လက်နက်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၆ လ၊ ဒဏ်ငွေ၂၀၀၀၊ ၎င်းကိုမပေးသွင်းနိုင်လျှင် နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် နှစ်လ ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြစ်မှုသုံးခုပေါင်းလျှင် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အကျဉ်း ထောင်ထဲ ၆ နှစ်နီးပါးနှင့် အကျယ်ချုပ် ၇ နှစ်ထဲ အကျုံးဝင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဒဏ်ငွေ ၆၀၀၀ ကိုမူ မဖြစ် မနေ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒဏ်ငွေ မဆောင်နိုင်လျှင် နောက်ထပ် ၈ လ ထောင်ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့တွင် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိသည်ကိုသိ၍ နောက်ထပ် အချိန်ဆွဲနိုင်အောင် တမင်တကာ ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ချက်က Port Blair တွင် လူတစ်ဦး ရူပီငွေ ၁၀၀၀၀ ကျ အာမခံငွေဖြင့် အကျဉ်း ထောင်ထဲမှထွက်ကာ အပြင်တွင် အကျယ်ချုပ်ဖြင့်နေခဲ့စဉ်က တရားရုံးသို့ ပေးဆောင်ခဲ့သော ရူပီငွေ ၃ သိန်း ၄သောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ထောင်ထဲသို့ပြန်ဝင်လျှင် ပြန်ပေးရမည် ဖြစ်သော်လည်း ပြန်မထုတ်ပေးသဖြင့် တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားရာ C.B.I မှ ကန့်ကွက်၍ တရားသူကြီးက ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လဲချက်ကို ပယ် ချခဲ့သည်။ ငွေကိုထုတ်ပေးလျှင် ၎င်းငွေဖြင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ကာ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ရမည်ကို မလိုလားသဖြင့် သွယ်ဝိုက်၍ ဟန့်တားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းငွေကို ပြန်ယူလိုလျှင် အထက်တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။ အ ထက်တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားမည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ်ရှေ့နေခ သိန်းနှင့်ချီ၍ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၄-၅ လကြာဦးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့အမှုကို ဆုံးဖြတ်အမိန့်မချမှတ်ခင် ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေမကြီး ဒေါ် Nandita Haksar နှင့် NCGUP ၀န်ကြီး ဒေါက်တာတင့်ဆွေတို့ Kolkata သို့လာပြီး West Bengal အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် West Bengal အစိုးရအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ချောချောချူချူနှင့် လွှတ်ပေးရန် သဘောတူခဲ့ သော်လည်း ကျွန်တော်တို့အမှု မဆုံးဖြတ်ခင် သုံးလေးရက်အလို နောက်တခေါက် ဆွေးနွေးပွဲတွင် West Bengal အစိုးရ သဘောထားပြောင်းသွားပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမှုပြီးသည့် တိုင် နိုင်ငံခြားသားမှုနှင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် (၁) အထက်တရားရုံးမှ လွှတ် ပေးရန် အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာရရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း။ (၂) သို့မဟုတ် ဗဟိုအစိုးရမှ ပြန်လွှတ်ပေးရန် အမိန့် တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း (၃) သို့မဟုတ် UNHCR မှ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အပြည့်အ၀ အသိအ မှတ်ပြုထားသော ထောက်ခံစာရရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဤနေရာ၌ ကျွန်တော်တို့တွင် ရရှိထားသည့် UNHCR မှ အသိအမှတ်ပြုထုတ်ပေးထားသော Under Cansinderation Certificate ဖြင့် အခြားဒုက္ခသည်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း သွားလာနေထိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်မပြုဘဲ ငြင်းပယ်ထားသည်။ (၄) သို့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ကျွန်တော်တို့ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်ပြုကာ လာရောက်ယူဆောင်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့တွင် ဤအချက်များနှင့် တခုမှမပြည့်စုံဖြစ်နေသည်။ (၁) အထက်တရားရုံးမှ လွှတ်မိန့်ရရန် လျှောက်ထားလျှင် အနည်းဆုံး ၆ လ၊ အများဆုံး တစ်နှစ်အထက်ထိ ကြာနိုင်သည်။ (၂) ဗဟိုအစိုးရသည် ကျွန် တော်တို့ကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲထားသောကြောင့် ဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လွှတ်ရန် အမိန့် တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ် ပြန်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ (၃) တတိယနိုင်ငံတစ်ခုခုက ဒုက္ခသည်အဖြစ် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးရန်မှာ UNHCR မှ တ ဆင့် သွားရမည်ဖြစ်သည်။ (၄) UNHCR က ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ ဒုက္ခသည်ကဒ်ပြား ထုတ်ပေး ရန်မှာလည်း Delhi ရှိ UNHCR ကိ်ုယ်စားလှယ်များနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံကာ စစ်ဆေးမေးမြန်း စီစစ်ခံပြီးမှ ဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် UNHCR နှင့် အိန္ဒိယအစိုးရအကြား သဘောတူညီမှုအရ UNHCR ကိုယ်စား လှယ်များသည် New Delhi အပြင်သို့ ထွက်ကာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားလိုသူများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရှိ။ မူအရ UNHCR ကိုယ်စားလှယ်များ Kolkata အကျဉ်းထောင်သို့ လာရောက်ကာ ကျွန်တော်တို့နှင့် လူတွေ့စစ် ဆေးရန်မဖြစ်နိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ကို လည်း အကျဉ်းထောင်ထဲမှ News Delhi သို့ UNHCR ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် သွားရောက်ခြင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် အိန္ဒိယအစိုးရသည် ကျွန်တော်တို့ လွတ်လမ်းအားလုံးကို ပိတ်ဆို့ချောင်ပိတ်ကာ စနစ်တကျဖန်တီး အချိန်ဆွဲ ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြပါသည်။ ၎င်းအပြင် အိန္ဒိယအစိုးရသည် မဗာပြည်တွင် November7နေ့ကျင်းပမည့် နအဖ စစ် အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုမည်ဟု လေသံပစ်နေပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင် ကျွန်တော်တို့ကို ဗမာပြည်သို့ ပြန်ပို့ရန် ရည်ရွယ်ထားပုံရပါသည်။ ယင်းကြောင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲပြီးသည့်အထိ အချိန် တစ်စုံ တစ်ရာရရန် ဥပါယ်တံမျှဉ်ဖြင့် အချိန်ဆွဲနေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ ဗမာစစ်အစိုးရလက်သို့ လွဲ ပြောင်းခြင်းခံရလျှင် လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရကာ ဆက်လက်၍ နှစ်ရှည်လများ အကျဉ်းကျခံရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ အကြောင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြီး၍ တက်လာသော အစိုးရသည်လည်း ယခုလက်ရှိ နအဖ စစ်အစိုးရ အ ထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်စေရေး အစီအစဉ်အရ နိုင်ငံတကာ အ သိုင်းအ၀ိုင်းက သူတို့ကို လက်ခံအသိအမှတ်ပြုလာစေရန် နိုင်ငံတကာမိသားစုကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားရန် စနစ် တကျ ဖန်တီးထားသော အရပ်သားအစိုးရအမည်ခံ စစ်အာဏာရှင်များ ဆက်လက်အုပ်စိုးကြမည်ဖြစ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ သဘောထားနှင့်ပေါ်လစီကို သိနိုင်ပေသည်။ ၎င်းတို့သည် NUPA နှင့် KNU အပေါ် သဘောထားမဟုတ်။ ရခိုင်တမျိုးသားလုံး၊ ကရင်လူမျိုးတခုလုံးနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် နအဖ စစ်အစိုးရကို တိုက်ပွဲဝင်ဆန့်ကျင်နေကြသော ဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအပေါ် အိန္ဒိယအစိုးရ၏သဘောထားဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အမျိုးသားများ တန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အ ခွင့်အရေးတို့အတွက် နအဖ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော NUPA နှင့် KNU မှရဲဘော်များဖြစ် ကြသည်ကို အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များက အတိအလင်းဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သို့ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ ဖ်ိတ်ခေါ်ချက်ဖြင့်လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ Lt. Cal Gtewal သည် ဤအမှုကိစ္စ၏အဓိကတရားခံဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ကို အယုံသွင်းကာ ကျွန် တော်တို့ထံမှ ငွေကြေးအမြောက်အများ ရယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း များကို သစ္စာဖေါက်ကာ ဗမာစစ်အစိုးရအလိုအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်များကို ရက်ရက်စက်စက် ဥပ ဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရသည် Lt. Cal Grewal ၏လုပ်ရပ် �မှား�များကို သိရှိခဲ့သော်လည်း အ ရေးမယူသည့်အပြင် ရာထူးပင်တိုးပေးခဲ့သေးသည်။ အိန္ဒိယအစိုးရ၏ �အရှေ့မျှော်� ပေါ်လစီနှင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှ သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ ရေနံနှင့်ဂတ်စ်တို့ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရရှိရေး၊ အိန္ဒိယ အရှေ့ မြောက်ဖက်ရှိ သူပုန်များအရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးအတွက် နအဖ စစ်အစိုးရကို နှစ်သိမ့်ချွေးသိပ်ရန် ကျွန် တော်တို့ကို ဓါးစာခံအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။ အိန္ဒိယ-ဗမာ- တရုတ် အစိုးရတို့၏ နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွင် ကျွန်တော်တို့ သားကောင်ဖြစ်နေကြရသည်။
အိန္ဒိယ စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိများကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော်တို့သည် NUPA နှင့် KNU မှ ရဲဘော်များဖြစ်ဟု စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ထားပါလျှက် အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်း ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့အစိုးရကို လက်နက် ကိုင် တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော Dr. (Cal) Lakshmi Sahgal တို့လို Freedom Fighter ဟောင်းများ Dr. Ashok Mitra (West Bengal) ဘဏ္ဍာရေးဝန်းကြီးဟောင်း)၊ Sumit Chakravartt (Affairs Weekly အယ်ဒီ တာ)၊ Surendra Mahon (ပါလီမာန်အမတ်ဟောင်း)၊ Sujata Bhadra (Association for Protection of Democratic Rights (APDR) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကဲ့သို့ West Bengal မှ အတတ်ပညာရှင်၊ အသိ ပညာရှင်များက ကျွန်တော်တို့ကို Freedom Fighters များ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဟု အသိအမှတ်ပြုထား သည်ကို အိန္ဒိယအစိုးရက မသိကျိုးကျွန်ပြုကာ Freedom Fighters များ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဟု အသိအ မှတ်မပြုဘဲ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် သာမန်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သူများနှင့် တန်းတူထားဆက်ဆံကာ သာမန်အ ကျဉ်းသားများရရှိသော အနိမ့်ဆုံးအခွင့်အရေးများဖြင့် အစားအသောက်ကအစ အလွန်ချို့တဲ့သော အနေအ ထားဖြင့် ထားရှိခြင်းမှာ အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို တော်လှန်ပုန်ကန်နေသော အဖွဲ့အ စည်းများကို လေယာဉ်ပေါ်မှ လေထီးဖြင့်ချကာ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ရောင်းချခဲ့သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံ သား အင်္ဂလိပ်လူမျိုး Peter Bleach ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ လက်နက်မှောင်ခိုသမားကို ထောင်ထဲတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတစ်ဦးရရှိသော အထူးအခွင့်အရေးများပေးကာ အိန္ဒိယ အကျဉ်းထောင်သမိုင်းတွင် တခါမှ မရှိခဲ့ ဘူးသော ထောင်ထဲတွင် Type-writer သုံးစွဲခွင့် စသည့် အထူးအခွင့်အရေးများ ပေးထားခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယလူမျိုးတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ပျက်စီးအောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကို အမှန်တကယ် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူ Peter Bleach ကို လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုဖြင့် တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ်တသက် အမိန့်ချမှတ် ထားပြီးပါလျှက် ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် ၄၄ ရက်ကျခံပြီး အိန္ဒိယသမ္မတကြီး၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အကျဉ်း ထောင်မှ အပြီးပိုင် လွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့သေးလျှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကို မည်သည့်အခါမှ ထိခိုက်နစ်နာ အောင် မပြုလုပ်ခဲ့သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရေးသမားများကို အိန္ဒိယသမ္မတကြီး၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အလျင်အမြန် လွှတ်ပေးရန်မှာ လုပ် သင့်လုပ်ထိုက်သော ကိစ္စဖြစ်လေသည်။
အိန္ဒိယပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်နီးနားချင်းကောင်းပီသစွာ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နှစ်ပေါင်း ရာ ထောင်ချီ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ ယဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြပြီး ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ရ သည့်အချိန်ကာလများတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီကာ နယ်ချဲ့လက်အောက် ကျွန်သဘောက်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများသည် အလွန်ရက်စက် ကောက်ကျစ်သော စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်းမှုအောက်တွင် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာများ ညှိုးနွမ်းကာ အလွန်ဆင်းရဲ ကျပ်တည်း လူတောမတိုးနိုင်သော အခြေအနေတွင် ဆိုက်ရောက်နေပါသဖြင့် ဗမာပြည်တွင် အမျိုးသားများ တန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် ဒုတိယအကြိမ် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲနေကြ သော ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီရိုင်းပင်းသည့်အနေဖြင့် ကမ္ဘာတွင် အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်မှ နိုင်ငံကြီးသား များဖြစ်သည်နှင့်အညီ အမှန်တရားဖက်မှ ရပ်တည်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်နှင့်ကရင် မျိုးချစ်ရဲဘော် ၃၄ ဦးတို့သည် အလွန်ကြမ်းတမ်းရှည်လျားလှသော ၁၂ နှစ်ကာ လကို ခက်ခက်ခဲခဲ စိတ်ရှည်သည်းခံစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသဖြင့် အလွန် ပင်ပန်းလှပေပြီ။ အိန္ဒိယ အာဏာ ပိုင်များ၏ နောက်ထပ်အတိုင်းအတာမဲ့ ချုပ်နှောင်ထားမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့ မျိုးချစ်ရဲဘော် ၃၄ ဦးတို့ အလျင်အမြန် လုံခြုံစွာ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများ၊ ကရင်လူထုနှင့် ပြည် တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ဗမာပြည်သူများ မိမိတို့တက်နိုင်သည့်ဘက်မှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင် ရွက်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
West Bengal, India ﻿
Posted by victorOway at 1:29 PM No comments:
The Kachin's last stand
၁။ ငါတို့ ရေးဆွဲမည့် အခြေခံဥပဒေသည် တမင်းတနိုင်ငံစနစ် (Unitary System) ကို၎င်း၊ ဘုရင်စနစ် ကို၎င်း ပြဌာန်းမည့် အခြေခံ ဥပဒေ မဟုတ်။ ပြည်ထောင်စု စနစ် (Federal System) ကို ပြဌာန်း သည့် အခြခံ ဥပဒေ ဖြစ် ရမည်။
၂။ ငါတို့ ထူထောင်မည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံခေါ် ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်သစ် တွင် ပြည်နယ်များ သည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ) ရှိစေရမည်။
၄။ တိုင်းသူပြည်သားမှန်သမျှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး တို့တွင်တရားမျှတမှုရှိ စေလျက် လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစိ အခွင့် အရေးများကို ဥပဒေ သက်ရောက်မှုတွင် ဆူကြုံ နိမ့်မြင့် မရှိ ပကတိ တန်းတူ ခံစားကြရမည်။
Posted by victorOway at 3:26 PM No comments:
Labels: လမ်းညွှန်ု (ရ) ချက်။
Tha Panglong Agreement Burmese and English Versions
Posted by victorOway at 3:19 PM No comments:
(ABSDF) စစ်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ကိုခင်ကျော်မှ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ စစ်ပွဲအပေါ် အကျဉ်းချုပ် သုံးသပ်ချက်
မန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရင်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) စစ်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ကိုခင်ကျော်မှ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ စစ်ပွဲအပေါ် အကျဉ်းချုပ် သုံးသပ်ချက်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား...။
Posted by victorOway at 1:54 PM No comments:
Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)။
- 14 Dec, 2010
အဲဒီထက် ကောင်းတဲ့ နည်းကတော့-- Kkeyboard က windows Logo Key လေးကို ဖိထားပါ။ ‘L’ ကို နှိပ်ပါ။ - Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom ကလေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Posted by victorOway at 2:57 PM No comments:
Tha Panglong Agreement Burmese and English Version...
(ABSDF) စစ်ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ကိုခင်ကျော်မှ လက...
Suu Kyi and her son takeastroll through Bogyoke ...